Soo hel jaantus Steve Jobs ah, oo lagu xuso qaar ka mid ah barnaamijyada caanka ah ee 'Apple launches' Waxaan ka socdaa mac
Soo qaado sawir gacmeed Steve Jobs, oo lagu xusayo qaar ka mid ah bilowga caanka ee Apple
Waqtigan xaadirka ah maahan inaan ogaanno waxa ay ku darsadeen Jobs shirkadda. Apple waxay hubisaa xuquuqda Steve Jobs waxayna daryeelaysaa ugu badnaan muuqaalkiisa. Haddii aan ogaanno, marar dhif ah ayaan aragnaa funaanado, bakeerro, ama shay kale oo leh sawirrada Shaqooyinka. Laakiin taageerayaal badan oo astaanta tufaaxa ah, waa astaan ​​waxayna jeclaan lahaayeen inay si uun u matalaan, sawirka Steve Jobs ama daqiiqado taariikhi ah oo shirkadda soo bandhigaysa alaabooyin calaamadeeyay hor iyo kadib.
Damtoys waa mid ka mid ah magacyadii hore isku dayay inay wakiil uga noqdaan Shaqooyinka miisaanka aasaasiga ah ee aasaasihii shirkadda Apple waagii hore, laakiin ay dhibaato xagga sharciga ah kala kulantay shirkadda Apple. Markan markale ayey isku dayeen. Waxaan arki karnaa Steve Jobs oo dhererkiisu yahay 30 sentimitir, soo bandhigida alaabada astaanta astaanta. Waa inaan dhahno shaqadu waa mid qalinjabinta, maxaa yeelay waxay u taagan tahay qaab suugaaneed, jimicsiga jirka ee agaasimihii hore ee Apple.
Inta badan wakiillada Damtoys, Shaqooyinka wuxuu u egyahay dhar caadi ah, oo leh jiinis, funaanad iyo kabaha isboortiga. Xitaa sharaabaadyadu waxay u muuqdaan kuwo si buuxda u metelaya oo muraayadaha indhaha waa la saari karaa. Jaantusku ma aha mid firfircoon, taas oo ah, waa si fiican loo qeexay. Waxaa ka mid ah daqiiqadaha halyeeyga ee astaanta, waxaan ka dooran karnaa kuwa kale: soo bandhigida iPad-ka 2010 ama MacBookga hawada sanadkii 2008. Deji wuxuu la yimaadaa iPad, Mac, miis iyo kursi gacmeed iyo tufaax qaniinsan. Realism-ka ayaa na geynaysa qolofka Apple ee ay la socdaan saxafiyiinta, waana sawir aan dhowr jeer aragnay.
Jaantusku iib maahan xilligan, laakiin waxaa lagu sii hayn karaa qiimaha $ 167,02. Haddii aad tahay qof jecel Apple iyo miniatures, ha seegin fursaddan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Soo qaado sawir gacmeed Steve Jobs, oo lagu xusayo qaar ka mid ah bilowga caanka ee Apple
Ku maamul goobtaada darawalka adag DaisyDisk, qiime kala bar ah waqti xaddidan
Laba iyo toban South waxay leedahay qiimo dhimis ilaa 50% ah oo ku saabsan qalabka 'Mac'